Itoobiya oo furtay marin xadeedka Wajaale iyo shardi cusub oo ay keentay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Itoobiya oo furtay marin xadeedka Wajaale iyo shardi cusub oo ay keentay
A warsame 14 August 2014 15 August 2014
Mareeg.com: Wasiirka Wasaaradda Arimaha dibada maamulka Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis, ayaa sheegay in Xuduudka Somaliland iyo Ethiopia shalay oo arbaco aheyd si rasmi ah loo furay. Wasriika ayaa sheegay in Ethiopia ku soo war galisay inay furtay Xuduudka si caadi ahna la iskaga gudbi karo Somaliland iyo Ethiopia xaduudka u dhexeeya.
“Waxaan doonayaa inaan idiin sheego inaanu la xidhiidhnay Dawladda iyo Safaaradda Ethiopia oo aniga iyo Cali Warancadde si aada uga hawl galnay, maantana ay noo caddeeyeen in Safaradii marayay Tog-wajaale iyo dadkii tagayay loo furay” ayuu yiei wasiir Biixi.
Wasiirka ayaa sheegay in Ethiopia fasaxday maritaanka Tog-wajaale, hase yeeshee ay la yimaadeen shuruudo aan markii hore jiri jirin, oo ay ka mid tahay in faro laga qaadayo dadka gudaha u gelaya dalkaas.
“Sidaad ogtihiin dadka Ethiopia tagaya ee diyaaradda raacaya ama caafimaad iyo arimo kale u tagaya way baxayeen oo dhibaato badani ma taagnayn, haseyeeshee safarradii marayay Tog-wajaale iyo Xuduuda oo marka hore dhibaato ka yara taagnayd waxay maanta noo sheegeen in si buuxda ay dadka iyo gaadiidkuba u marayaan laakiin ay ku soo kordhiyeen in dadka Faraha laga qaado. Markaa farahaas ayaa la iska qaadayaa waana in dadka tagaya ee Fiisaha ka doonayaa ay ogolaadaan Faraha la iska qaadayo oo ay kala shaqeeyaan Ethiopia, haseyeeshee wax dhibaato ah oo dalka ka taagan ma jirto” ayuu yiri Wasiirka Arimaha dibada Somaliland.
Dawladda Ethiopia ayaa Xuduudka Xiray bilihii la soo dhaafay sababo amaan awgeed ka dib markii Jabuuti qaraxa ka dhacay Bishii May ee sanadkan. Qaraxa Jabuuti oo dadka gaystay Somaliland sii mareen ayaa sababay in Ethiopia iyo Jabuuti Somaliland ka xiraan xuduuda.
Xinaanshaha Marin xadeedka Wajaale ayaa culeys farabadan saaray dad u safri jiray Ethiopia, waxaana bilihii lasoo dhaafay halkaas laga soo celiyey kumanaan Soomaali ah oo rabay iney gaaraan Addis Ababa iyo magaalooyin kale.
Debadbax lagu taageerayo Cali Khaliif oo ka dhacay Laascaanood